जान्नुहोस्, कहाँ–कहाँ हुँदैछ ‘शत्रुगते सांगीतिक टुर’ ? - विवेचना
जान्नुहोस्, कहाँ–कहाँ हुँदैछ ‘शत्रुगते सांगीतिक टुर’ ?
March 7, 2018 3,149 Views
अहिले चलचित्रको प्रचारका लागि सांगीतिक टुर गर्ने क्रम बढेको छ । यहिक्रममा, गीतसंगीत र ट्रेलरका कारण चर्चामा रहेको चलचित्र ‘शत्रुगते’को यूनिट पनि सांगीतिक टुरमा निस्कने भएको छ । स्थानिय पत्रकार र दर्शकसँग भेटघाट गर्ने उद्देश्यले यो टुरको आयोजना गर्न लागिएको कलाकार तथा निर्माता हरिवंश आचार्यले बताए ।
Previous टाइब्रेकरमा मनाङ भाग्यमानी
Next अर्बपतिहरुको सूचीमा पाँच स्थानमाथि उक्लिए विनोद चौधरी
Pingback: spells for business growth
Pingback: prazdniki na ukraine 1953
Pingback: 13 yanvarya 5654
Pingback: the national about today testo
Pingback: Prazdniki s2noyabrya po 17 dekabrya
Pingback: dailymotion online converter
Pingback: arte nella seconda guerra mondiale
Pingback: 17 oktjabrja
Pingback: 17 fevralja
Pingback:3patti online game free download for pc
Pingback: ne mogu lishitsja devstvennosti
Pingback: black sabbath war pigs testo
Pingback: смотреть онлайн порно волосатые писи любители
Pingback: how to write limit in latex
Pingback: delta 14 651 professional 12hp bench mortising mac
Pingback: праздник в апреле
Pingback: volare testo italiano
Pingback: la fiumana del progresso testo
Pingback: качаем пресс
Pingback: direktor ispolnitelnyj administrativnyj
Pingback: Tècniques culinàries2Apunte